လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့ နေဆန်း ရဲ့ ဆုတောင်းစာ – စွယ်စုံသုတ
လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့ နေဆန်း ရဲ့ ဆုတောင်းစာ
ဖေ့စ်ဘုတ်ဆယ်လီ နေဆန်းကတော့ သူများနဲ့မတူ တမူထူးခြားတဲ့ ဟာသေလေးတွေတင်ဆက်ရင်း လူသိများလာခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ် ပါတယ်။..
လှပတဲ့မျက်နှာအမူအရာ အပြောအဆိုတွေေကြောင့် လူအများရဲ့အားပေးမှုကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ပြင် နေဆန်းက ပရိသတ်တွေအားပေးမှုကြောင့် ရရှိလာခဲ့ တဲ့ ဝင်‌ငွေများဖြင့် သိန်းထောင်ချီတန်သော အိမ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆောက်လုပ်နေထိုင်လာနိုင်လာခဲ့ပါတယ်။
နေဆန်းက လက်ရှိမှာတော့ သူဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်ရင်း ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကိုရရှိကာ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိဆွတ်ခူးနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။.နေဆန်းကလည်း သူ့ရဲ့အလုပ်ကိုအာဏာသိမ်းခံထားရချိန်တောင်မှ ဂရုမစိုက်ပဲ အလုပ်တွေ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတာကြောင့် ပြည်သူများရဲ့ အပြစ်တင်ဝေဖန်မှုကိုလဲ အပြင်းအထန်ခံနေရ ပါတယ်…
အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့နေဆန်းကဘယ်ဘက်ကိုမှ ရဲရဲဝင့်ဝင့်ရပ်တည်လာခြင်းမရှိတာကြောင့် နေဆန်းနှင့်ပတ်သတ်သည့် ကြော်ငြာများရိုက်ကူးထားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များက နေဆန်းနဲ့ပက်သက် တဲ့ လုပ်ငန်းများကို ရပ်ဆိုင်းပစ်ရတဲ့အထိ ဝေဖန်ခံခဲ့ရပါသေးတယ်။
အဲနောက်ပိုင်းမှာတော့နေဆန်းက ပရိသတ်များအပေါ် မထိမဲ့မြင်ရေးသားချက်တွေကြောင့် အပြင်းအထန်ဝေဖန်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ နေဆန်းတစ်ယောက် ပရိသတ်တွေကိုပြန်လည်တောင်း ပန်စာရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။
ခုနောက်ပိုင်းတွေမှာတော့ နေဆန်းတစ်ယောက်ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာကနေ ပျောက်ကွယ်နေပြီး Instagram မှာပဲ ပျော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာ‌တော့ နေဆန်းက သူတော်ကောင်းတွေမို့ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်များ စောင့်ရှောက်ပေးပါဘုရားဆိုပြီး ရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။
နေဆန်းရေးသားထားတဲ့အောက်မှာတော့ ပရိသတ်တွေက ကြားကနေတည့်တည့်လေး သေချာထိုင်ထားနော်ဆိုပြီး ရေးသားခဲ့ကြပါသေး တယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း နေဆန်းရဲ့ဆုတောင်းစာလေးက ဘယ်သူတွေဘက်ကို ဆုတောင်းပေးတယ်လို့ ထင်တယ်ဆိုတာကိုလည်း ရေးပေးသွားခဲ့ကြပါအုံးနော်…
လွပတဲ့ မ်က္ႏွာ အမူအရာ အေျပာအဆိုေတြေ ၾကာင့္လူအ မ်ားရဲ့အားေ ပးမႈကို… ပိုင္ဆိုင္ထား သူ တစ္ေယာက္ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ..ထို႔ျပင္ ေနဆန္း ကပရိသ တ္ေတြ အားေပးမႈေျကာင့္ ..ရရွိလာခဲ့ တဲ့ ဝင္ေ ငြမ်ားျဖင့္ ..သိန္းေထာင္ခ်ီ တန္ေသာ အိမ္ေကာင္းေ ကာင္းမြန္မြန္.. ေဆာက္လုပ္… ေနထိုင္လာနို င္လာခဲ့ ပါတယ္ေ
နဆန္းက.. လက္ရွိ မွာေတာ့ ..သူဝါသနာပါတဲ့ အလု ပ္ေတြ ကိုလုပ္ကိုင္ရင္း ပရိသတ္ေတြရဲ့ အားေပးမႈကိုရရွိ ကာ.. ေအာင္ၿမ င္မႈေတြ ရရွိဆြတ္ ခူးေနၿပီပဲ ျဖစ္ပါတ ယ္။.. ေနဆန္းကလည္းသူ႔ရဲ့အ လုပ္ကို.. အာဏာသိမ္းခံ ထားရခ်ိန္ေ တာင္မွ . ဂ႐ုမစို က္ပဲ အလုပ္ေတြ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနတာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားရဲ့ …ၾအ ပစ္တင္ ေဝဖန္မႈကို လဲ.. အျပင္းအ ထန္ ခံေနရ ပါတယ္…
ခုေနာက္ပို င္းေတြမွာေ တာ့ ေနဆန္းတစ္ေယာ က္ေဖ့ဘုတ္စာမ် က္ႏွာကေန ေပ်ာက္ကြ ယ္ေနၿပီး Instagram မွာပဲ ေပ်ာ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔မွာ‌ေ တာ့ ေနဆန္းက သူေတာ္ေ ကာင္းေတြမို႔ နတ္ေကာ င္းနတ္ျမတ္မ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေပးပါဘုရားဆိုၿပီး ေရးသားလာခဲ့ပါတယ္။
ေနဆန္းေရးသား ထားတဲ့ေအာ က္မွာေတာ့ ပရိသ တ္ေတြက ၾကားကေန တည့္တည့္ေလး ေသခ်ာထိုင္ထားေနာ္. ဆိုၿပီး ေရးသားခဲ့ၾက ပါေသး တယ္။ ပရိသတ္ႀကီး လည္း ေနဆန္းရဲ့ဆုေ တာင္းစာေလးက ဘယ္သူေ တြဘက္ကို ဆုေတာင္းေ ပးတယ္လို႔ ထင္တယ္ဆိုတာကိုလည္း ေရးေပးသြားျခဲ့ ကပါအုံးေနာ္…
“လေးနှစ်ကျော် ချစ်ခဲ့တဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေး ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ရင်ဖွင့်ပြောကြားလိုက်တဲ့ .. Aငြိမ်းဖြူ “
“တော်လှန်ရေး ရဲဘော်ရဲဘက် အစ်ကို ရေမွန် သို့...